महिला पोर्नस्टारको बयान : ‘शूटिङका बेला महिलाको शरीरमाथि यसरी शोषण गरिन्छ’ | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | १२ चैत्र २०७५, मंगलवार १४:०९ |
एजेन्सी – हामी जब पोर्न भिडियो हेर्छौँ, तब हामीले आफ्नो धरातल बिर्सिन्छौं, मानवता बिर्सिन्छौँ । हामीले हेरिरहेको भिडियोमा महिलालाई मात्र एउटा उपभोग्य वस्तुका रुपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । शारिरिक सम्बन्धका लागि मात्र एक शरीर । जसरी चाहनुहुन्छ मोड्नुस्, तोड्नुस् ।
जब क्यामेरा सुटिङ गर्न बन्द हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ ? के हुन्छ त्यो शरीरलाई, जुन चोटिल हुन्छ, थकित हुन्छ ? यसको बारेमा बताएकी छन् एक ३५ वर्षीया पोर्नस्टारले । उनको नाम हो,मडिसन मिसिना । उनी यसक्षेत्रमा काम गर्न थालेको १८ वर्ष भयो । २०१२ देखि अहिलेसम्म उनले २ सय भिडियो गरेकी छन् । तर, यति अनुभवका बाबजुत पनि मडिसनलाई लाग्छ कि क्यामेराका सामुन्ने सेक्स सम्झन लायक हुन्न । दर्दनादक हुन्छ, नक्कली हुन्छ ।
यतिमात्रै होइन, जुन पोजिसनमा महिला पोर्नस्टारसंग सेक्स गरिन्छ, त्यो स्वभाविक रुपमा अप्राकृतिक हुन्छ । जसका कारण उनलाई एकदमै पीडा हुन्छ । साथै उनको गर्भाशय र अण्डाशयमा एकदमै नराम्रो असर पर्छ । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या यो हो कि फिल्म सुटिङको बेला ‘कट’ भन्ने शब्द नै हुन्न । लामो लामो सिनहरु सुटिङ गरिन्छ । जहाँ महिलाको पीडालाई ध्यान दिएर एक कटसमेत गरिँदैन ।
सुटिङका दौरान पनि समानता नभएको भन्दै उनले एक अंग्रेजी वेबसाइटलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, ‘कट नगर्नुको कारणले समस्या पैदा गर्छ । तर, कसैलाई पीडा भइरहेको छ भने पनि फिल्म शुटिङ गर्न रोकिँदैन । फिल्म खिच्न तब रोकिन्छ, जब पुरुष एक्टरलाई केही समस्या हुन्छ । पोर्न स्टारको अनुहार हाम्रो स्मृतिमा हराउँदैन । मात्र हामी देख्न चाहँदैनौँ । फेरि एकपटक यो भन्नुपर्छ कि पोर्नमा काम गर्ने महिलालाई हामी एक सामान्य महिलाका रुपमा हेर्न सक्दैनौँ । हाम्रा लागि त उनी मात्र एक यौन खेलौना हुन्छिन् ।’
Previousमाथिल्लो तामाकोशीमा नगद प्रवाहको समस्या
Nextविप्लव आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ
मोदीको सन्देश बोकेर सुष्मा आउँदैः यस्तो छ मिसन
१८ माघ २०७४, बिहीबार ०८:४८
रुसले बनायो कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप, राष्ट्रपति पुटिनकी छोरीमा प्रयोग
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार १८:३९
१२ बर्षीया बालिकालाई गर्भवती बनाएपछि…
९ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०९:१३